uurka iyo dhiiga - iftineducation.com
uurka iyo dhiiga
iftineducation.com – Dheecaanada ay sameeyaan qanjirada ku jira gudaha xubinka taran ka haweenka iyo dhuunta hore ee makaanka dumarka ayaa dibada uga soo saara unugyada dhintay iyo cudur sababaha bacteria da loo yaqaano soo saaritaan ka qanjira daasi xubnaha taranka ay soo saaraan dheecaana daasi ayaa wuxuu xubin ka taran ka haweenka ka dhigaa mid nadiif oo ka caafimaad qaba caabuq.
Aqriso : Astaamaha lagu garto Uurka Bilaawgiisa.
Inta badan dheecaan ka ka yimaada xubin ka taranka haweenka waa mid caadi ah dumar kana waa ku kala duwan yihiin xaddiga dheecaan ka xubin kooda taran ka ka yimaada.
Dheecaan ka ka yimaada dumarka caafimaad ka qaba midab kiisu waa mid cadaan nadiif ah una eg caano caddaan ah wuxuuna inta badan yimaadaa xilliga caadada soo dhawdahay iyo inta ay caadada joogto.
waxaad dheecaan ka ka imaado xubinka taran ka haween ka ku arki kartaa is bedelo ay kamid yihiin in haweentu isku aragto dheecaan badan ama dheecaan leh ur ka duwan urtii dheecaanadii ay hore u arki jirtay isbedelada noocan ah haweenta waxa ay isku arki kartaa xilliyada qaar iyadoo caafimaad qabta xilliya daasi na waxaa kamida.
1: xilliga haweenta ukxan teeda ka soo go’ayso galka ay ku jiraan ukumaha .
2: xilliga haweentu nuujineyso ilmo
3: xilliga haweentu kacsan yahay dareen keeda.
Sidoo kale urta dheecaan ka ka yimaada xubin ka haween ka waxaa urta ay ku taqaanay ka bedeli kara in haweentu yeelato uur.
Haddaba is bedelada aan kor ku soo sheegnay wixii ka baxsan waxey cadeyn u tahay xaalado caafimaad daro oo soo wajahay xubnaha taran ka ee haweenta inshaa allaah na waa inoo soo socdaan.
Haddii dheecaan ka haweenta xubin keeda taran ka ka imaanaya uu leeyahay ur daran adag yahay is jiid jiidaya midab kiisuna yahay isku jir uuna jiro cun cun iyo gubasho gudaha xubin ka taran ka haweenka waxey calaamad u tahay caabuq iyo infection ka jira gudaha xubnaha taran ka haweenta.
Maxaa keena dheecaan ka jirrada ah ee ka yimaada xubinka taran ka haweenka?
Is bedel kasta oo ku dhaca xaddiga ama qiyaasta bacteria da normal ka ah ee ku nool gudaha xubin ka taran ka haween ka waxuu saameyn ku yeelanayaa urta midab ka iyo qaabka dheecaan ka ka imaada xubnaha taran ka haweenka.
calaamadaha uurka bilowga ah